Britain oo shaaca ka qaaday in qaar kamid ah ciidamadeeda kala bixi doonto Afghanistan – SBC
Britain oo shaaca ka qaaday in qaar kamid ah ciidamadeeda kala bixi doonto Afghanistan
Posted by editor on Julaay 5, 2011 Comments
Cameroon oo si lama filaan ah ku booqday dalka Afghanistan ayaa sheegay in kala bixitaanka ciidamada Britain ay noqon doonto mid kooban taasi oo aan saameyn ku yeelan doonin milatariga Britain ee ku sugan dalka Afghanistan.
Ra’iisal wasaare Cameroon ayaa booqday tuulada lagu magcaabo Laashkar Jaah ee ku taala gobolka Helmand, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidanka Britain ee tiradoodu gaaraysa sagaal kun iyo shan boqol oo askari.
Cameroon oo kula hadlayey saxafiyiinta xarunta ciidanka milatariga ayaa sheegay in howsha ciidanka Britain ee dalka Afghanistan ay u gudbtay heer cusub iyadoo la arki karo ciidanka qaranka iyo booliska Afghanistan oo hadda howlgalo balaaran sameenaya.
Cameroon ayaa soo gaabiyey booqashadiisa kagadaal markii shaaca laga qaaday dilka askari British ah.
Askarigan oo la la sanaa ayaa meydkisa la helay kadib markii xabado lagu dhuftay, waxaana mas’uuliyadaas sheegtay xarakada Daalibaan.
Dilka askarigan ayaa ka dhigaysa tirada ciidanka British-ka ah ee lagu dilay dalka Afghanistan tan iyo intii dowladda Britain ay ka qeyb gashay duulaankii Afghanistan 374 askari.
Ra’iisal wasaare Cameroon ayaa la filayaa in maalinta beri ah uu golaha guud ee barlamaanka hor dhigo warbixin ku aadan ciidamo kala soo bixidda dalka Afghanistan.
Cameroon ayaa ku nuuxnuuxsaday in uu ilaalin doono waqtiga kama dambeysta ah si ciidamada looga soo saaro dalkaas sanadda 2015.